ရှိသည်ဟုမှတ်စရာဝင်ငွေပေါ်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းအခွန်။ ။ ဒါဟာဘာလဲ? ပိုပြီး UTII ဥပဒေများစည်ပင်သာယာခရိုင်ပြဋ္ဌာန်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ, အထွေထွေအခွန်စနစ်တစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုသောသာအချို့အမျိုးအစားများကိုသက်ဆိုင်နေသည် ...
ဘဏ်မှတစ်ဆင့်အပေါင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ “ လုံခြုံရေးအပေါ်” ဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်မတူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ပြprovides္ဌာန်းထားသည့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေက“ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘဏ်မှရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်မှာသေချာသည်။
အတွင်းသတင်းအချက်အလက်ကဘာလဲ? အဖြေကရိုးရှင်းပါတယ်။ လုပ်ငန်း၏လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်၊ ကုမ္ပဏီ INSIDER INFORMATION (eng ။ Insider information) - လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်အချက်အလက်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းပြောနေတာ ...
ရုရှား lotto ယူနိုင်ရန်အနိုင်ရရှိတဲ့အမျိုးအစားကဘာလဲရာခိုင်နှုန်း? 50 ချက်ချင်း% နှင့်အနိုင်ရ 35% ။ အဆိုပါပြည်နယ်လှည့်ဖြားမကလိုအပ်သောလိမ့်မည်။ ရုရှားအခွန်ဥပဒေများနှင့်အညီ ...
ကျနော်တို့ပျားရည် paid အခွန်ပိုက်ဆံလျော်ကြေးပေးဘယ်လောက်ငါ့ကိုပြောပြပါ။ န်ဆောင်မှု? မုန့်ညက်ကိုသူတို့ဒီဆေးကုသမှုများအတွက်လူမှုရေးနှုတ်ယူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ဦးတစ်ပြားမှ ပြန်. မလာဖူးချုံ့လေထု။ ညာဘက်သည်မိမိအပေါ် ...
ကိုလန်ဘိုအပေါ်အခွန်ပြန်ပေးပို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါဟာ service provider ကအတူစာချုပ်ကောက်ချက်ချရန်လိုအပ်ပေသည်။ အခွန်ထမ်း, IRS ကိုက e-file ကိုနှင့်အခွန်စစ်ဆေးရေး: စနစ်၏အဆိုပါစစ်ဆင်ရေး3နှစ်ဖက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ အဆိုပါအော်ပရေတာ function ကို ...
သငျသညျအနုညာတစီရင်၏မန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား? အဆိုပါခုံသမာဓိမန်နေဂျာ၏ဥပဒေရေးရာ status ကို defining အဆိုပါဥပဒေ, နောက်ဆုံးပေါ်လိုအပ်ချက်များကိုရန်လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်။ လိုအပ်ချက်များ၏စုစုပေါင်းအုပ်စုနှစ်စုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: အပြုသဘောတစ်ပါရဂူဘွဲ့ရှိသင့်ရာ ...
အခြေချအကောင့်။ ဒါကရှေ့နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဗဟိုဘဏ်၏ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၈ - ၁ "၂.၃ ။ ခရက်ဒစ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သောတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ထူထောင်ထားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စာရင်းရှင်းငွေစာရင်းများကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။
JSC ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုပြောပြပါ? ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှမဖြစ်မနေညွှန်ကြားချက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်သောသူကအခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုပ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်အရေးမယူ) ကဖြစ်ပေါ်စေကုမ္ပဏီ၏လျှင်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသော (ဒေဝါလီ) အဲဒီကိုတွေ့ ...
ကစာရွက်စာတမ်းများတစ်အခွန်နှုတ်ယူခြင်းရဖို့သမီးကိုစုသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာပင်စင်စားအခွန်ခြေတုဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ။ သူမသည်ခြေတုအဘို့အကြှနျုပျအဘို့ပေးဆောင်။ ငါပင်စင်စားဖြစ်၏။ တစ်ဦးပင်စင်စားအခွန်ပေးဆောင်? ...
ကြွေးမြီစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ LLC - ဤသည်အခြားလိမ်လည်မှုလား အတွင်းပိုင်း
ကြွေးမြီစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ LLC - ဤသည်အခြားလိမ်လည်မှုလား gt inside; ဤစုဆောင်းသူများသည်မည်သည့်နေရာမှလာကြသနည်း။ ဒု; ဘဏ်သည်အစုရှယ်ယာအနည်းငယ်ကိုစုဆောင်းထားသောကိုယ်စားလှယ်ထံသို့အကြွေးမဆပ်နိုင်အောင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ယခုမှာဤသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။ ...
သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘာမှမပေးဆပ်ရသေးသူတွေရဲ့အာမခံကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုယူနိုင်တာလား။ ရေနစ်သေဆုံးသောသူ၏ကယ်တင်ခြင်းသည်သူ့နောက်၌ရှိသောသူများ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကြောက်လန့်လျှင် ...
နိုင်ငံသားများ၏ Non-taxable နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေ၏တန်ဖိုးရုရှားတွင်ယခုကဘာလဲ? ဝင်ငွေရဖို့တချို့လမ်းကြည့်နေပါသလား အဆိုပါအခွန် Code ကို၏ non-taxable နိမ့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေခွန်အဖြစ်မဆိုဤကဲ့သို့သောအရာမဆံ့မထားဘူး။ ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပြီး ...
လျှပ်စစ်မီးလျှပ်စစ်မီးခိုးယူ Theft များအတွက်ပြစ်ဒဏ်များ၏ပမာဏ၏တွက်ချက်မှုတစ်အရပ်ဘက်ထုံးစံ၌အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ prichinnnogo ပြန်လည်နာလန်ထူ entailing အုပ်ချုပ်ရေးပြစ်မှုအမျိုးအစားအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှကျူးလွန်သူဆောင်ကြဉ်းဖြစ်ပါတယ် ...
စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်တွေကိုကဘာလဲ? ဘောဂဗေဒ၏ (ပြင်သစ်ကနေ။ Ressource adjuvant) အရင်းအမြစ်များစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုစီးပွားရေးအခြေခံသဘောတရား, အရင်းအမြစ်, ထုတ်လုပ်မှုသေချာတဲ့နည်းလမ်းကိုဆိုလိုသည်။ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို, သဘာဝ (ကုန်ကြမ်း, ဘူမိရူပ) သို့ခွဲခြားထားတယ် ...
ဒါပေါ်မှာငါ့ကိုငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ် Credit History ပေါ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေဗဟိုဘဏ်အပေါ်ဘဏ်များနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေအပေါ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများထိန်းညှိအခြေခံဥပဒေများအပြောနှင့်။ စသည်တို့ကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ...
vysheskazanamou အားဖြင့်)) တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း% 23 ဖို့ ,, 6ch မှ 22.00 နှင့်အတူ 6.00do10 ညဥ့်ညနှင့်အတူငွေပေးချေမှုတိုးညဥ့် smegn များ၏ငွေပေးချေမှုရေတွက်ဖို့ကိုဘယ်လိုဖွင့်တဦးတည်းရှင်းလင်းချက်ထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ်။ တစ်ဦးကိုအစားထိုး၏အမှု၌ ...
ကန့်သတ်များ၏ပညတ်တော်အနုပညာအောက်မှာကျသွား offense ရှိမရှိ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများ၏ 159, ဒါမှမဟုတ်လိမ်လည်မှုကိုသင်အကြာတွင် 8 နှစ်ပေါင်း DMPA အစပျိုးနိုင်သလဲ အကြောင်းမူကားပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးပိတ်ဆို့မှုများ, န့်အသတ်များပညတ်တော်အတိုင်းမတည်ရှိပါဘူးဆောင်ရွက်သည်။ ...
အခွန်လား။ အခွန်လား။ တာဝန်မှာပြည်နယ်ဥပဒေအရပြamounts္ဌာန်းထားသည့်ပမာဏအတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့များမှအချို့သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သောအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များပါဝင်သည်။
ငှားရမ်းအတွက်ဝယ်ကားအဘယျအကနှင့်ဖြစ်ပျက်ပုံကိုတစ်စုံတစ်ဦးက, စတငျသငျသညျကားတစ်စီးဝယ်ယူ, သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက် vernte အချို့ပိုက်ဆံအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောငှားရမ်းပြီဖြစ်ပါတယ်။ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,576 စက္ကန့်ကျော် Generate ။